အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်မှ စတင် မယ်ဆိုရင် နောက်ကျသွားပါပြီ။ | မာသင်
စီးပွားရေး ဒိုင်ယာရီ ( Dec 10,2018)
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 563 နှစ် ကျော်လောက်က ဂူတင်ဘတ်က ပထမဆုံး စာအုပ်ကို ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။
အဲဒီတုန်းက ဥရောပကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့၇% သာစာဖတ်တတ်ပါတယ်။
စာပေချစ်သူတွေ၊ စာအုပ်ဝယ်ယူသူတွေ သန်းနဲ့ချီပြီး တစ်နေရာတည်းမှာ အစုံဝယ်ယူလို့ရနိုင်တဲ့
Amazon ဆိုတာ မရှိဘူး။
စာအုပ်ဆိုင်တွေ ဆိုတာ မရှိသလို၊
ဈေးကွက်မှာ အစစအရာရာ အားလုံးပြည့်စုံကောင်းမွန်မှ စာအုပ်ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ယနေ့စာဖတ်စရာရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။
မိုက်ကရိုဆော့ ( microsoft ) ရဲ့ပထမဆုံး ဗားရှင်းကို ပြန်ကြည့်လိုက်။
Google မထွက်ခင်၊ ဈေးကွက်ရဲ့အင်အားကြီး Yahoo နဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်။
၄ လက်မထူပြီး 5G ပဲ ဆန့်တဲ့ပထမဆုံး Ipod ကို ပြန်ကြည့်လိုက်။
သေတ္တာပုံးတစ်ခုလောက်ကြီးမားပြီးလေးလံတဲ့ပထမဆုံး ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာကို ပြန်ကြည့်လိုက်။
အားလုံးက မပြည့်စုံ၊ အဆင်သင့်မဖြစ်တဲ့ကြားထဲကနေ ထိုးဖောက်ထွက်လာကြတာ။
အရာအားလုံး အဆင်ပြေမှ ထွက်မယ် ဆိုရင် နောက်ကျသွားပြီ။
မင်းဘယ်လောက်တတ်လို့လဲ …. ဆိုတဲ့အများပြောတဲ့စကားကို မေ့လိုက်ပြီး၊
တတ်သလောက် သင်နိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ စ လုပ်ပါ။
ငွေရှိမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်မှာပေါ့ …. ဆိုတဲ့အများပြောတဲ့စကားကို မေ့လိုက်ပြီး၊
ရှိတဲ့အိုင်ဒီယာ နဲ့ လုပ်နိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ခံယူချက် နဲ့စ လုပ်ပါ။
မင်း ကုန်ပစ္စည်း ဈေးကွက်မရှိပါဘူးကွာ …လို့အများပြောတဲ့စကားကို မေ့လိုက်ပြီး၊
ရှိတဲ့ဈေးကွက် ရောင်းမကွာ ဆိုတဲ့ခံယူချက် နဲ့ စရောင်းပါ။
ဖေ့ဘုတ်မှာ ကိုယ်ပိုင် ဘရန်းတစ်ခု၊ အမည်တစ်လုံးကို တည်ဆောက်ချင်တာလား။
မင်း ဖေ့ဘုတ်မှာ ပြောနေတာတွေ ဘယ်သူမှ နားထောင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ …လို့အများပြောတဲ့စကားကို မေ့လိုက်ပြီး ၊
နားထောင်တဲ့သူကိုပြောမကွာ ဆိုတဲ့ ခံယူချက် နဲ့ စ ပြောပါ။
မင်း…မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ … ဆိုတဲ့သူများပြောတဲ့စကားကို မေ့လိုက်ပြီး၊
ငါ..ဖြစ်အောင် လုပ်ပြမယ်ကွ လို့ …
ယုံကြည်မှုအပြည့် နဲ့… မျက်လုံးစုံမှိတ်